Iqela lehotele lePacific Resort liSungula uluhlu lweWayini ekhethekileyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Iqela lehotele lePacific Resort liSungula uluhlu lweWayini ekhethekileyo
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba eziPhuliweyo zaseCook Islands • Culinary • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba eziNtsha zaseNew Zealand • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iiwayini kunye neMimoya
Ekuboneni kokuqala, awunakukuqonda ukufana phakathi kweGisborne, New Zealand kunye neTropical Cook Islands. Nangona kunjalo, xa ujonga ngokusondeleyo uya kuqala ukuqaphela ukufana okufihlakeleyo; indalo ende yolwandle olunentlabathi emhlophe, indawo enemozulu entle enelanga, iindawo ezimangalisayo zeentaba, kwaye ukongeza konke, abahlali abanobuhlobo abahlala besenza konke okusemandleni abo ukuqinisekisa amava ongayi kuwulibala ngokukhawuleza.
Kunxweme oluseMpuma lwesiQithi esiseNtla saseNew Zealand, iGisborne ngummandla wesine ngobukhulu kweli lizwe okhulisa iwayini; Ikhaya lokudityaniswa kwabavelisi beewayini ezinkulu, iivenkile ezithengisa iivenkile ezithengisa iivenkile, kunye nabalimi beshishini. Kulapha apho uya kufumana amabhaso okuphumelela i-Longbush isidiliya kunye ne-winery, usapho olunenkampani kunye nolusebenzayo olujolise kwiwayini entle.
NgoJulayi, ngo-2018, u-Longbush wajoyina imikhosi ephumelele imbasa yeQela lehotele lePacific Resort (PRHG), ukuvelisa uluhlu olukhethekileyo lweewayini ezisasazwa kwiipropathi zayo zaseCook Islands. Umnini weLongbush, uJohn Thorp, uthi "kuhlala kukho uphuhliso olutsha kwishishini, iimozulu ezahlukeneyo ezenza isivuno kunye neemarike ezintsha zokuhlola".
I-PRHG kunye neLongbush bayonwabela ubudlelwane babo bendalo. Iintaba zeGisborne ukuya emantla nakumntla mpuma indawo yokuhlala, ngelixa imeko yemozulu eyomileyo iphola ehlotyeni ngumoya wasempuma mpuma ovela kulwandlekazi lwePasifiki. Umhlaba ochumileyo we-Gisborne sedimentary uzuza kakuhle kwezi meko zemozulu ziyahambelana kwaye isiphumo sendawo efanelekileyo yokukhulisa nokuvelisa iwayini ezikumgangatho wehlabathi.
Ngamava angaphezulu kweminyaka engama-25 kolu shishino, i-Thorp izisa ubutyebi bamava nolwazi ekuveliseni iwayini esemgangathweni. Iqela lika Thorp labenzi bewayini lisebenzise amandla ommandla waseGisborne ukuvelisa uluhlu oluquka iMerlot-Rosé, iPinot Gris, kunye neMerlot yeendwendwe zePRHG.
I-PRHG kunye neLongbush zendele nzulu kwiindawo abahlala kuzo kwaye uluvo losapho luyinto ebalulekileyo kubo bonke abaqhubi boutique. Kubonakala kufanelekile ukubiza iwayini ejikeleze umxholo woluntu; IMaaua, iNōku, kunye neT'a'au. IMaua, eguqulelwe kwisi-Maori seziQithi zikaCook kuthetha ukuba ngabethu, iMerlot-Rosé edlamkileyo neyilwe ngokumangalisayo; UNōku, ongowam, uPinot Gris onomtsalane kwaye olungeleleneyo, ngelixa uTā'au, ongowakho, emncinci, emnandi kwaye enesidima ephakathi eMerlot.
Uluhlu ngoku luyafumaneka kwiparadesi encinci yeeCook Islands kwaye luyonwabelwa ziindwendwe kwiipropathi zePRHG.